UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
ikhaya IIMALI ZE-EUROPE UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
Disemba 23, 2017
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'Broadway'. Ibali lethu leDanny Rose Childhood kunye ne-Untold Biography Facts kuletha i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho / imvelaphi, ubomi bolwalamano kunye nezinye izinto ezingenayo.
Ewe, wonk 'ubani uyazi indima yakhe njengesihlaselo esiphezulu esisekhohlo kodwa abasembalwa bajonga uBanny Rose's Bio onomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UDaniel Lee Rose Wazalelwa ngomhla we-2nd kaJulayi 1990, eDoncaster, e-United Kingdom kubazali baseJamaican. Wazalelwa kunina u-Angela Rankine Rose kunye noyise, uNigel Rose.
Omnye akakwazi ukuxoxa ngobantwana bukaRose ngaphandle kokukhankanya umngane wakhe wabantwana kunye nabanye abantu baseJamani Kyle Walker obabini bakhula ndawonye eYorkshire, eMntla England. UDanny inyanga ekhulile kuKyle kunye naye onomdla wokuhlala naye.
UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts -Inkqubela yebhola
UDanny noKyle bobabini babephumelela ekuqaleni kwebhola kwaye badlala imidlalo yokuncintisana ngexesha leentsuku zesikolo eYorkshire. UDanny kamva waba ngumkhiqizo weSikolo soLutsha lwaseLeeds United apho waqalisa uhambo lwakhe ekudumeni kwi-2005. Wenza imimangaliso eyambona eqhubela phambili kwiqela lebhola yolutsha ngaphambi kokufumana inxaxheba kwiqela lakhe langoku leTottenham Hotspur ngoJulayi 2007. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
UDanny Rose ungomnye wabantu bebhola abanobukrakra abathanda ukugcina ubomi bobudlelwane njengabucala kunokwenzeka. Nangona kungabikho iirekhodi eziqinisekisiweyo zobudlelwane obukhoyo okanye obudlulileyo beRose, ubuye wabonwa kwi-2014 ngexesha elihle ngokubhekiselele kwi-blonde echazwe njengeqabane lakhe elunxwemeni eBarbados.
UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts -AmaSerbia
UDanny wayekade enexhoba leengoma zobudlova ngexesha lomdlalo ngaphambi kokuthunyelwa emva komkhwelo wokugqibela wokukhaba ibhola ekuhlanganiseni ubuhlanga.
Iintsuku emva kweso siganeko, abadlali baseSerbia nabasebenzi abachaphazelekayo kumdlalo baceliwe ukuba benze ingxelo ngokusemthethweni malunga nesiganeko ngenkathi iKomidi yoLuleko yaseSerbia yenze iiseshoni ezingavamile kulo mbandela. Kungekude ngaphambi kokuba u-UEFA ekugqibeleni avelise ityala leqela kunye nabalandeli balo.
UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
UDanny Rose wakhulela kwintsapho yezemidlalo. Sikuzisa iinkcukacha malunga nosapho lwakhe.
Utata: Uyise kaDanny Rose, uNigel Rose (echazwe ngezantsi) ngumnye oye wamxhasa uncedo lwebhola likaNyana wakhe.
Ku-2012 wabonisa ukungonwabi ngendlela uDanny ayezithobela ngayo iingoma zobandlululo ngabantu baseSerbia abangenasicatshulwa, ukuphuhliswa kwakhe ngokuchaza oku kulandelayo.
"Ndaziva ndingenamandla okunceda unyana wam. Ukumjonga kwakhe ephantsi kweengoma zomhlanga kunye nokubethelwa ngamatye kuye kwakunzima ukuthatha. Kwakuyiphupha elibi "
UMAMA: Uncinci owaziwa ngoMama kaDanny Rose, u-Angela Rankine oye wahlaselwa kunye nendodana yakhe kunye no-malume wakhe, uMarko noHugh Rankine ngentsapho yasebusuku. Isiganeko senzeke kwiDolophu yaseDoncaster xa uDanny kunye no-Uncles bakhe bacelwa ukuba bashiye i-cafe ngenxa yokuba abadli bekhalaza besenza ingxolo eninzi-nakuba bekhanyela ukukhwaza, ukuphathwa kakubi kwamapolisa kwakumyalelo wolu suku.
Ukuxela ubuxhatshazo bexesha elikude u-Angela Rankine wachaza ukuba;
"UDanny wachithwa ngamaxesha amaninzi kwaye xa ndabuza umgcawuli ukuba ayeke ukubiza amapolisa ...Andizange ndiyenze nantoni na kodwa bayandibamba ukuba kwipolisi yamapolisa kwaye yandihambisa. Into esinokuyayiqonda isizathu sokuba bafanele basebenzise i-gas spray kuDanny xa sele ndibanjwe ngamagumbi amathathu. Kufuneka kusetyenziswe kuphela xa iziphathamandla zisengozini. "
UBHUTI: UDanny unomntakwabo omncinane owaziwa ngokuba nguMitch Rose odlalela iGrimsby Idolophu ngoku. Ngaphandle kweMitch, uDanny unomnye umzalwana owaziwa njengoMitchell Rose. Bobabini uMitch, uMitchell noDanny bangumzala kaMichael Rankine.
UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts -Izinwele Ezikhutshwayo
UDanny Rose waphinda waba neengcamango malunga nekamva lakhe eTottenham ngokubonakalisa iinwele ezibomvu. Akuzange kuthathe ixesha elide ngaphambi kokuba abathandi bebhola bebhola bexela ukuba i-football genius e-Manchester United, okanye iLiverpool, uphuhliso olubangele inkxalabo yabalandeli beSpurs.
Nangona kunjalo, uDanny wathatha ixesha lokucacisa ukubonakala kwakhe ngokuqwalasela oko
"Ndiyenzile ngenxa yokuba iRoses ibomvu"
Ixesha elichazwe ekuqaleni kweengcamango zokudluliselwa kukaDanny njengoko kucetyiswa ngabalandeli. Akuzange kuthathe ixesha elide ngaphambi kokuba uRose abe nomdla wokujoyina enye iblabhu kwaye watshintsha iinwele zakhe kwi-'roses' kumnyama omnyama.
UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts -Ubudlelwane kunye nePochettino
UDanny unobudlelwane obukhulu noMphathi weTottenham, uPochettino. Yingakho ubizwa ngokuba ngu "Unyana kaGaffer". Ihlabathi laseNgilani lithi uyazijonga ngokuba nguye isilwanyana somfundisi kuba uchitha ixesha elingakumbi kwiofisi yePochettino kunanoma yimuphi na osebenza naye. Ukuqinisekiswa kweNkcazo kaDaily Danny ibonisa ukuba;
"Ndiya kutyelela i-gaffer kwixesha eliqhelekileyo kwaye sele ndidlelane naye. Sithetha kakhulu. "
UDanny Rose Childhood Indaba I-Untold Biography Facts -Ukulwa Nexinzelelo
UDanny wabuya waxinezeleka ngenxa ye-Injury eyabonayo ukuphosa isenzo kwibala lebhola kwiinyanga ezili-8. Ukongezelela koko, umalume wakhe wazibulala ngexesha elixa umama wakhe waxhatshazwa ngokobuhlanga. Ukuyiphonsa bonke abantu besondela batyotyle umntakwabo kaDanny ebusweni bakhe.
Uninzi kakhulu iimvavanyo kunye neengxaki zexesha elithile uDanny kwafuneka afune uncedo lobuchwepheshe ngokufumana iinkonzo zengqondo. Wafunyaniswa ukuba unexinzelelo, isimo sengqondo avule ngalo malunga nenkcazo yokushicilela i-England Squad phambi kwekhamera yehlabathi ye-2018 eRussia.
"Akukho mfihlelo endikuye kwixesha lokuvavanya eTottenham ngeli xesha, nto leyo eyakhokelela ekubeni ndibone i-psychologist, kwaye ndandifumanelwa ukuba ndinexinzelelo, okungekho mntu owaziyo, kwaye kwafuneka ndibaleke eTottenham.
Ukutyhila ezinye iimeko ezingakhange zikuncede ukuphucula imeko yakhe yonyango ngelo xesha, uDanny wachaza oko;
Ukuphuma kwintsimi, bekukho nezinye iziganeko-ngo-Agasti, umama waxhatshazwa ngokobuhlanga ekhaya laseDoncaster. Wayethukuthele kakhulu kwaye wayecaphukisa ngayo, kwaza kwafika umntu waya endlwini waza wacinga ukutshiza umntakwabo ebusweni. Kwakuyixesha lokuvavanya. "
Nangona kunjalo, uDanny ubeke zonke izinto emva kwakhe aze abuyele kwintsimi yokudlala ukuze anike abalandeli imimangaliso ebenokuyilangazelela ngexesha lokulimala kwakhe.
QHUBEKA: Ndiyabonga ngokufunda iNdaba kaBanny Rose yeBantwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!
John Stones Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBriography Facts
URan Bertrand Ibali leNkwenkwe yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Matshi 29, 2018
I-Todd Cantwell Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Todd
Agasti 29, 2019
UDanny Drinkwater Ibali leNgcaciso ye-Untold Biography Facts